[XALAY] Sida loo ogaado khayaanada bangiga mahadsanid AI
Inicio/Sirdhaad dabiici ah/Sirdoonka macmalka ah si loo ogaado khayaanada bangiga
0 2.920 2 daqiiqo akhri
Isweydaarsiga NASDAQ wuxuu bilaabay inuu u adeegsado baaritaanka khayaanada.
Isweydaarsiga saamiyada ee Waqooyiga Ameerika ee muhiimka ah wuxuu bilaabay inuu soo saaro qalab leh sirdoon farsamo oo ku saleysan tikniyoolajiyad waxbarasho oo qoto dheer; taas oo ah qayb-hoosaad ka mid ah barashada mashiinka caanka ah ee diiradda saara isticmaalka shabakadaha neerfaha. Fikradda ugu weyn ee lagu ogaanayo khayaanada bangiga oo markaa lagu faafiyo aqoonta la helay shirkadaha kale ee ay khusayso.
Mashruucu wuxuu bilaabay inuu shaqeeyo usbuucyo ka hor ujeedkiisa ugu weyna waa dhaqdhaqaaqa saamiyada saamiyada, kuwaas oo kumanaan saamiyado ah oo kuyaala suuqa saamiyada mudo 24 saacadood ah, si loo raadiyo loona ogaado qaababka kaladuwan ee ku sifoobay hawlgal been abuur ah bacda.
Soo helida khayaanada bangiga waa ujeedka ugu weyn
Kooxda AI waxay horey u dhisteen qaabkoodii ay ugu talagaleen inay ku baaraan xogta ganacsi ee balaaran isla markaana ay rabaan inay ku aqoonsadaan dhaqdhaqaaqyada ka leexan kara isbedellada ku yimid suuqa caadiga ah. Helitaanka si loo ogaado khayaanada bangiga; Hawshan waxaa hadhow falanqeyn doona bini'aadamka oo go'aamin doona haddii waxqabadka la helay uu waxyeello u geysan karo boorsada iyo in kale.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso: [SOO SAARAN] HALISKA ugu weyn ee Sirdoonka Artifishalka ah
Hadafka muddada-dheer ee sarrifka ayaa ah in haddii nidaamka AI uu guuleysto ay tahay in loo qoondeyn karo nidaam loo yaqaan 'wareejinta waxbarashada' oo markaa lagu dabaqo wixii horay looga bartay AI si loogu dabaqo noocyada kale ee suuqyada macluumaad yar ayaa la heli karaa. Isweydaarsiga NASDAQ wuxuu qorsheynayaa inuu ku hirgaliyo tikniyoolajiyaddan barnaamijka softiweerka shirkadaha kale ee caalamiga ah.
Khiyaanooyinka khatarta ku ah suuqa saamiyada.
Mid ka mid ah khiyaanooyinka ugu faahfaahsan ee hadda jira ayaa jira mid loo yaqaan 'isdabamarinta'; Tani waxay ka kooban tahay marka maalgeliyuhu fuliyo amarro aad u tiro badan si loo iibiyo saamiyada shirkadda oo sababa in qiimaha saamiyadaasi hoos u dhacaan ka dibna uu baajiyo amarrada ka dibna uu go’aansado inuu iibsado saamiyo badan oo shirkadda la sheegay, taas oo yeelan doonta qiimaha ugu yar ficilkeeda awgeed.
El NASDAQ Waa isweydaarsiga saamiyada labaad ee ugu weyn uguna weyn ee Mareykanka isla markaana waxay ku shaqeynayeen si otomaatig ah illaa iyo dhowaan.
Suuqgeynta dhijitaalka ah ayaa dib isu soo cusbooneysiisa iyada oo ay ugu wacan tahay sirdoonka farsamada
barashada mashiinka Sarrifka saamiyada ogaadaan khayaanada bangiga khayaanada bangiga IA AI wuxuu ogaadaa khayaanada bangiga Sirdhaad dabiici ah NASDAQ